Fikarohana momba ny firaisana Sarimihetsika "Reincarnation" nataon'i Chanel sy ireo tranga taloha momba an'i Coco Chanel, Karl Lagerfeld, Pharrell Williams ary Cara Delevingne - Fikarohana Reincarnation
Tamin'ny Desambra 2014, sarimihetsika fohy notarihin'i Karl Lagerfeld, talen'ny famoronana nataon'i Chanel, no nalefa tao amin'ny YouTube. Amin'ity horonantsary ity, Reincarnation, izay omena eto ambany, ny olona tsirairay dia aseho fa manana endrika ivelany mitovy amin'ny vanim-potoana ankehitriny toy ny tamin'ny fotoany taloha. Tsindrio ireo sary hanitarana azy ireo.
Ity lohahevitra ity, izay endri-javatra mitovy endrika amin'ny fiainana andavan'andro ka hatramin'ny iray hafa, dia tohanan'ny fikarohana fikarohana reincarnation ary ny porofon'ny tanjona ny reincarnation. Ireo tranga ireo dia ahitana ireo izay nohavaozina Ian Stevenson, MD, avy amin'ny Oniversiten'i Virginia, Raha te hahalala bebe kokoa, azafady, alaivo mankany:
Reincarnation tranga miaraka amin'ny fahatsapana ara-batana
Hatramin'ny 2001 dia niara-niasa tamin'ny trance medium aho Kevin Ryerson, izay mitondra mpitari-dalana antsoina hoe Ahtun Re, izay naneho ny fahaizany manao lalao taloha miaraka amin'ny fahamendrehana avo lenta. Amin'ny alàlan'ny asako miaraka amin'i Kevin sy Ahtun Re, nahazo fiainana taloha ho an'ireo olona tafiditra ao amin'ny Chanel izahay Reincarnation horonan-tsary. Anisan'izany:
Case Reincarnation Pharrell Williams
Pharrell Williams lehibe tao Virginia Beach, Virginia, fonenan'ny Fikambanan'i Edgar Cayce ho an'ny fikarohana sy ny fahazavana (IZAO). Edgar Cayce dia iray amin'ireo psikolojia sy sarimihetsika malaza indrindra amin'ny tantaran'i Amerika. Cayce dia nampiroborobo ny fotopampianaran'ny reincarnation ary noho izany dia azo inoana fa naseho an'i Parrell ny foto-kevitra momba ny reincarnation.
Nilaza i Pharrell fa mino an'Andriamanitra izy ary misy izy Universalist. Ny porofon'ny reincarnation dia mampivoatra ny fomba fijery universalista.
Mba hahafantaranao ny momba ny androm-piainany efa ho ela hatrizay ho an'ny Pharell, azafady, alaivo mankany:
Raharaha fanalefahana indray an'i Anton Grot | Pharrell Williams
Karl Lagerfeld Reincarnation tranga
Nandritra ny androm-piainany taloha, Karl dia mpanao hosodoko malaza, mpanakanto iray antsoina hoe Egon Schiele. Mandritra ny androm-piainanay dia maneho fahaiza-manao mitovy isika izay nomen'Andriamanitra antsika, eo amin'ny sehatry ny famoronana. Ity fomba ity dia voalaza ao amin'ny bokiko:
Egon Schiele dia mpanao sary hoso-doko, izay namorona tamin'ny maha-mpanakanto hafa, tamin'ity indray mitoraka ity izay mpitarika ny lamaody, izay marihina amin'ny endrika sary.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny fiainana teo aloha Karl Lagerfeld, miangavy anao hitsena:
Raharaha Reincarnation an'i Egon Schiele | Karl Langerfeld
Cara Revelarnation Cara Delevingne
Modely anglisy, mpihira ary mpilalao sarimihetsika Cara Delevingne dia fantatra fa isan'ny fianakavian'ny mpanjaka eoropeana.
Rehefa nanontany momba an'i Cara Delevingne aho dia gaga fa nilaza tamiko i Ahtun Re fa Cara dia iray amin'ireo rahavavin'i Marie Antoinette. I Marie dia vadin'i Louis 16, Mpanjaka any Frantsa.
Rehefa avy nandinika ny fitantaran'ny rahavavin'i Marie Antoinette aho, dia nanontany aho fa i Cara no reincarnation Maria Christina, izay no be mpanakanto indrindra tamin'ny rahavavy. Misy fitoviana ara-batana manaitra eo amin'i Maria Christian sy Cara. Tamin'ny fivoriana iray nifanaovana tamin'i Kevin Ryerson, Ahtun Re dia nanamafy fa i Cara Delevingne dia ny fanambadiana ao amin'i Maria Christian, Duchess of Teschen.
Amin'ny tsipika mahaliana iray, ao amin'ny Chanel Reincarnation sarimihetsika, Cara dia mampiseho ny fahaterahana indray ao amin'ny vehivavy aristokraty izay aseho amin'ny sary lehibe eo amin'ny rindrina, izay mitovy be amin'i Cara. Amin'izany fomba izany, ny sarimihetsika dia maneho ny lova fiainam-pirenenan'i Kara manokana.
Raharaha Reincarnation Coco Chanel
Fiainana taloha Coco Chanel dia avy koa dia avy. Raha te hahalala bebe kokoa, azafady, mandehana:
Raharaha fanalefahana indray an'i Ellen Louise Demorest | Coco Chanel
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Coco Chanel, Karl Lagerfeld, Pharrell Williams ary Cara Delevigne dia mitovy endrika amin'ny fiainany taloha.
Ny fiainana taloha talenta: Ny talenta amin'ny artista nasehon'i Coco Chanel, Karl Lagerfeld, Pharrell Williams ary i Cara Delevingne dia hita taratra amin'ny fiainany taloha.
Fiovan'ny firenena sy firazanana: Ireo tranga ireo dia mampiseho fa afaka miova ny fiainana sy ny hazakazaka amin'ny fotoana iray. Ny fahatakarana fa ireo marika ara-kolontsaina ireo dia afaka miova avy amin'ny fahatongavana ho iray hafa dia afaka manampy amin'ny famoronana tontolo milamina kokoa, satria ny ankamaroan'ny fifandirana sy ny ady dia mifototra amin'ny tsy fitoviana amin'ireo antony ireo.
Anton Grot dia mpahay poloney poloney iray. Ny reincarnation an'ny Grot, Pharrell Williams dia teraka tamin'ny Afrikana-Amerikanina.
Egon Schiele dia Australiana, raha ny teraka tao amin'ny vatana vaovao indray, Karl Langerfeld dia teraka tany Alemana.
Frantsay i Marie Christina, fony Cara Devingne dia teraka tany Grande-Bretagne. Tadidio fa fahavalon'ny ady niady tamin'ny ady maro i Frantsa sy anglisy.
Coco Chanel dia frantsay, fa i Ellen Demorest dia teraka tany Etazonia.
Raha hijery ireo tranga taloha niaina nahitana mpanakanto, dia alaivo izany:
Kasia Reincarnation art sy Design